Dagaal u dhaxeeya Shabaab iyo Amisom oo ka socda Shabellaha dhexe – STAR FM SOMALIA
Dagaal u dhaxeeya Shabaab iyo Amisom oo ka socda Shabellaha dhexe
Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha dhexe, ayaa sheegaya dagaal u dhaxeeya ciidamada Amisom iyo kuwa Shabaab inuu ka socda duleedka Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Dagaalkaan ayaa wuxuu yimid, kadib markii ciidamo Amisom ah oo lugeynaya Shabaab ay wadada u galeen sida uu xaqiijiyay Cornel. Maxamuud Koronto oo ka mid ah Saraakiisha ciidamada Xooga dalka ee Shabellaha Dhexe.
Wararka waxa ay sheegayaan dagaalka inuu ka socdo inta u dhaxeyso Deegaanka Biyo cadde iyo Miir tuugo, waana dagaal culus oo labada dhinac hub kala duwan ay isku adeegsanayaan.
“Dagaalka wuu socdaa, wuxuuna ka socdaa Biyo cadde iyo Miir tuugo inta u dhaxeysa, Amisom oo lugeynaysa ayaa Shabaab wadada u galay, ciidankeena xoogana waa ay ku baxeen.” Ayuu yiri Sarkaalkaan.
Lama ogaan karo Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi, maadaama labada dhinac ay ku dagaalamayaan deegaano howd ah, ayna adag tahay in la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay.
Ciidamada Amisom ee dagaalka uu ku qabsaday inta u dhaxeysa Miir tuugo iyo Biyo cadde, ayaa waxa ay yihiin ciidamada Burundi oo Saldhig Millateri ku leh duleedka deegaanka Biyo Cadde.
Ciidamo gurmad ah oo ka tirsan xooga dalka Somaliya ayaa ka kala baxay Degmooyinka Mahadaay iyo Jowhar ee xarunta Gobolka Shabellaha dhexe, si ay dagaalkaasi uga qayb qaataan.
Guddiga Doorashada Dadban oo diiday Natiijada Xildhibaan mar kale dib loo soo doortay.
Doorashada Aqalka Sare oo maanta ka dhaceyso magaalada Muqdisho